तपाईंको ईमेल अप्टिमाइज गर्नका लागि एक गाईड ओपन, क्लिक-थ्रु, र रूपान्तरण दरहरू Martech Zone
एउटा ग्राहक जुन मँ हरेक हप्ता ग्राहकहरु संग छ एक बढि निराशाजनक माध्यम निर्माण र एक सफल ईमेल विपणन कार्यक्रम कायम राख्न को लागी हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा तपाईको इ-मेल मार्केटिंग सूची बढ्दै जाँदा तपाईको छुट्याउने टाउको दुखाइदिनुहोस्। यस्तो देखिन्छ कि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उत्तम अभ्यासहरू पुरस्कृत गर्ने कुनै आशा त्यागेका छन् र केवल लाटो एल्गोरिदम छन् जसले राम्रो प्रेषकहरूलाई दण्ड दिन जारी राख्छ।
मुद्दामा, उद्योगमा मेरो एक सहकर्मीले याहू पाए! आफ्नो ईमेलको १००% ब्लक गर्दै - हरेकमा उहाँको प्लेटफर्मको पालनाको बावजुद उद्योग मानक र उत्तम अभ्यास याहू द्वारा सूचीबद्ध पोस्टमास्टर। परिक्षणको रूपमा, उनले आफ्नो मेल ट्रान्सफरलाई नयाँ आईपी ठेगानामा सारिदिए र तिनका ईमेलहरू मुद्दा बिना नै गुजार्न थाले। उही सामग्री, उही ग्राहकहरु, केवल एक फरक IP ठेगाना। कहिलेकाँही मलाई लाग्छ कि ISP हरु लाई यादृच्छिक रूपमा IP ठेगानाहरु लाई रोक्न को लागी हेर्नुहोस् कि कम्पनीले प्रतिक्रिया दिईरहेको छ। कम से कम याहू! ईमेलहरू अस्वीकार गरे, यद्यपि ... धेरै अन्य ISP हरू उनीहरूलाई रद्दी फोल्डरमा पठाउँछन् प्रेषकलाई अपरिचित।
निस्सन्देह, त्यहाँ छन् ईमेल मार्केटिंग गल्तीहरू तपाइँले आफ्नो सूची र सामग्री सिर्जना गर्दा बचाउन सक्नुहुन्छ। साथै, त्यहाँ तपाईंको ईमेल अनुकूलन को एक धेरै साधन छन्। यो इन्फोग्राफिक, ईमेल मार्केटिंग अनुकूलन ह्याक्स र केस स्टडीहरू, F 99 फर्मबाट अप्टिमाइजेसन विधिका धेरै विवरणहरू। म यो शब्दको ठूलो प्रशंसक होइन Hack... मैले पत्ता लगाए कि यी सबै विधिहरू तपाईंको ईमेल प्रोग्रामको साथ परीक्षणको लागि योग्य छन्।
ईमेल अनुकूलन विधिहरू समावेश गर्दछ
विषय लाइन अनुकूलन - एल्गोरिदम र ग्राहक व्यवहारले विषय लाईनलाई ईमेल लुकाउन वा यसमा क्लिक गरीरहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाएको छ। धेरै कम्पनीहरू समावेश गर्दै छन् इमोजिस साथै।
Preheader पाठ - जब हामीले हाम्रो न्यूजलेटर सामग्रीबाट निर्मित डायनमिक पाठको साथ हाम्रो स्थिर न्यूजलेटर प्रिप्रेडर पाठलाई प्रतिस्थापित गर्‍यौं, तब हामीले इनबक्स प्लेसमेन्ट र खुला दरहरूमा द्रुत वृद्धि देख्यौं। मानिसहरूले पूर्वावलोकनहरू पढ्छन् - यसको फाइदा लिनुहोस्!
प्रेषक नाम -% 68% अमेरिकीहरूले उनीहरूले देखेका "नामबाट" उनीहरूको ईमेलमा आधारित ईमेल खोल्दछन्। के तपाईंको नाम बाट तपाईंको कम्पनी राम्रो प्रतिनिधित्व गर्दछ? के यो तपाईंको ईमेल ठेगानासँग मेल खान्छ?
विभाजन - तपाइँको ईमेल मार्केटिंग सूची विभाजित र लक्षित सामग्री अद्भुत परिणाम ड्राइव तर अक्सर जटिलता को कारण बेवास्ता गरिएको छ। यो प्रयासको लायक छ र सबै ईमेल मार्केटिंग प्लेटफर्महरूले यसलाई समर्थन गर्दछ।
निजीकरण - [पहिलो नाम सम्मिलित गर्नुहोस्] पछाडि जानुहोस् र तपाईंको ईमेल अभियानमा विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस् जुन तपाईंको ग्राहकहरूको जानकारी र खरीद ईतिहासको लागि निर्दिष्ट छ। ईमेल प्रेषकहरूले revenue २% राजस्वमा वृद्धि देखेका छन् र दुई पटक रूपान्तरण दर जब ईमेलहरू निजीकृत हुन्छन्।
स्वचालन र ट्रिगरि। - समय सबै कुरा हो, त्यसैले तपाईंको सम्भावना वा ग्राहकको व्यवहारको आधारमा ईमेल प्राप्त गर्नु सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
बटन र कल-टु-एक्शन - यदि तपाइँ तपाइँको ईमेल एक अवतरण पृष्ठ को रूप मा चित्रित, एक कल-टू-एक्शन ग्राहक तपाइँको ब्रान्ड संग संलग्नको अर्को चरणमा ड्राइभ गर्न को लागी छ? यदि होईन भने तपाईले आफ्नो ईमेललाई अप्टिमाइज गर्न ठूलो अवसर हराउनु भएको छ।
तस्बिरहरू - ईनबक्सहरू व्यस्त छन्, त्यसैले एक ग्राहकको अपेक्षा तपाईंले आफ्नो ईमेलमा राख्नु भएको हरेक होशियारीका शब्दहरू पढ्नु सम्भव छैन। संलग्नता बढाउनुहोस् र क्लिक गर्न को लागी ग्राहकलाई पढ्न र क्लिक गर्न आकर्षित गर्न आकर्षक छवि प्रदान गरी। एनिमेटेड GIF हरू थप फ्लेयर थप गर्नुहोस्!
भिडियो - जबकि धेरै ईमेल प्लेटफर्महरूले पूर्ण रूपमा भिडियो समर्थन गर्दैन, तपाईं कम्तिमा प्ले बटनमा तपाईंको भिडियोको स्क्रीनशट प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। जब ग्राहकले प्ले बटन क्लिक गर्दछ, तिनीहरूलाई पृष्ठमा ल्याउनुहोस् जुन भिडियोले स्वत: भिडियो सुरू गर्दछ।
हराउने डर (FOMO) - तपाईंको ईमेल वरिपरि जरुरीताको भावना सिर्जना गर्न खुला दरहरू र रूपान्तरण दरहरू ड्राइभ गर्न सक्दछन्। मलाई अफ्ठ्यारोको साथ एन्टिमेन्ट्स समावेश गर्न मनपर्दछ जुन घर कारकमा प्रस्ताव संग सम्बन्धित म्याद सकिन्छ।
समय - बिर्सनुहोस् पठाउनको लागि उत्तम समय बकवास तपाईंको ईमेलको लागि फरक पठाउने समयहरू परीक्षण गर्नुहोस् र त्यसपछि पठाउँनुहोस् जब यसले सबैभन्दा ठूलो भिन्नता ल्याउँछ। तपाईले सेगमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र समय क्षेत्रको आधारमा स्ट्यागर प्रेडहरू।
मोबाइल प्रतिक्रिया - सबै ईमेलको %२% मोबाइल उपकरणमा देखा पर्दछ। के तपाइँ मोबाईल उपकरणमा कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नको लागि तपाइँको ईमेल जाँच गर्नुभयो? खराब डिजाइन गरिएको मोबाइल ईमेलको प्रभावमा तपाईं छक्क वा डराउन सक्नुहुन्छ।
ईमेल सामग्री - पाठकहरूको स्तर र प्रतिलिपिको लम्बाइले तपाईंको क्लिक-थ्रु र रूपान्तरण दरहरूमा प्रभाव पार्न सक्छ।
ईमेल ढाँचा - प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के हो त्यो हेर्नको लागि कहिले HTML ईमेलको सट्टा मात्र एउटा पाठ ईमेल पठाउने प्रयास गर्नुहोस्? जबकि HTML ईमेलहरू सुन्दर हुन सक्दछन्, उनीहरू ध्यान पाउन सक्दैनन् जुन पाठ ईमेलले गर्दछ!
यहाँ पूर्ण इन्फोग्राफिकको साथमा केहि रमाईला तथ्यहरू र तथ्या throughout्कहरू सहित!
टैग: पठाउनको लागि उत्तम समयईमेल स्वचालनईमेल बटनहरूकार्यको लागि ईमेल कलईमेल सामग्रीईमेल ढाँचाईमेल छविहरूईमेल मार्केटिंग कार्यक्रमईमेल अनुकूलनईमेल निजीकरणईमेल preheaderईमेल विभाजनईमेल पठाउने समयईमेल पठाउँदछईमेल पाठट्रिगर ईमेलईमेल भिडियोहराइरहेको डरfomoनामबाटhtml ईमेलसमाचार पत्रअनुकूलनसादा पाठ ईमेलpreheader पाठप्रेषक नामविषयपरीक्षण